डा. केसी अनसनलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलगायतको समर्थन
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गरेर १६‌ औँ पटक अनसनमा रहेका प्रा. डा. गोविन्द केसीप्रति पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत २० जना नागरिक समाजका अगुवाले एक्यबद्धता जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य विधेयक र केसी अनशन
स्वास्थ्य क्षेत्रका जायज माग राखी पटक–पटक गरेर अहिले १६ औं अनशनमा जीवन र मरणको दोसाँधमा डा. गोविन्द केसी इलाममा छट्पटिरहनुभएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक : मुख्य विवाद मनसायपत्र पाएकालाई सम्बन्धन
संसदीय समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएलगत्तै डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६ औं अनशन थालेको सात दिन भइसकेको छ । चार महिनाअघि यस्तै अनशन सरकारसँग सहमतिमा टुंगिएको थियो ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक
१६ औँ अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । इलाम अस्पतालमा सोमबार बिहान सारिएका केसीको स्वास्थ्य स्थिति जानकारी गराउँदै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बिजेन्द्रकृष्ण शाहले तत्काल उनलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।
डा‍‍. केसीकाे मुटुमा समस्या, इलाम अस्पताल भर्ना
१६ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई मुटुमा समस्या आएको चिकित्सकले जनाएका छन् । अस्वभाविकरुपमा मुटुको धड्कन बढ्नुका साथै निमोनिया पनि देखिएपछि उनलाई आज बिहान इलाम अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँगका सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी १६औं पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा आइतबार सदरमुकाममा ज्येष्ठ नागरिकले र्‍याली निकालेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले चार दिनदेखि इलाममा सत्याग्रह गरिरहेका प्रा.डा.गोविन्द केसीको आमरण अनशनलाई सदाको लागि अन्त गर्ने सुनिश्चित वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
भोलिदेखि अनशन बस्छु : डा. केसी
स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सूधारको माग राख्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले भोलि (बुधबार)देखि इलाममा सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीचको सम्झौता कार्यान्वयनमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदले असहमति जनाएका छन् ।
यी हुन् चिकित्सा शिक्षा विधेयकका ४ विवादित विषय
चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विवादित विषय बुधबार पनि टुङ्गो लाग्न सकेन । सत्तापक्षीय र विपक्षी सांसदहरु विभाजित भएपछि सहमति खोज्न भन्दै भोलि (बिहीबार) सम्मका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ ।
अनशन तयारी गर्न डा.केसी इलाम पुगे
चिकित्सा शिक्षा र सेवाका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी सरकारलाइ १६ औं सत्याग्रह सुरु गर्ने दुइ साते अल्टिमेटमको अन्तिम दिन मंगलवार इलाम पुगेका छन । यस अघिको १५ औँ सत्याग्रह जुमलाबाट सुरु गरेका डा.केसीले पुस १७ गतेसम्म आफनो माग पुरा नभए अनसन गर्ने चेतावनी दिदै आएका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफावार छलफल सकियो
चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथिको छलफल फेरि सर्‍यो
चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथिको छलफल फेरि पनि पछि धकेलिएको छ । कांग्रेस सांसदहरुको कार्यव्यस्तताका कारण विधेयक माथि मंसिर ९ गतेबाट मात्रै छलफल हुने भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको छलफलमा मन्त्री उपस्थित, सांसदहरु नै अनुपस्थित
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगत चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथि छलफल गर्न बनेको उपसमिति बैठकमा सांसदहरु नै अनुपस्थित भएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक मंसिर २ भित्र संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारी
संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमितिलाई बुधबार समयसीमासहित निर्देशन दिएको छ । समितिले सक्दो चाँडो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
चिकित्सा विधेयकमा छलछाम
चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नगराएर सरकारले सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीमाथि छलछाम गरेको छ । यो छलछाम स्वदेशी सुविधा सम्पन्न अस्पतालबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा चाहने नेपाली जनताप्रति उपेक्षा हो ।